စတိုင်အွန်လိုင်းအဝတ်အထည်ဆိုင်: Trendy Men's Eyewear
Metal Trim နှင့် Bamboo Case တို့ဖြင့် Polarized Cherry Wood Full Frame
ရီးရဲလ် Sandalwood နေကာမျက်မှန်များ၊ Ice Blue Polarized မျက်ကပ်မှန်များ၊
Wood Wayfarers နေကာမျက်မှန်
Zebrawood နေကာမျက်မှန်များ၊ ကြယ်များနှင့်ဘားများ၊
Zebrawood အပြာရောင် Polarized မှန်ဘီလူးနှင့် Case နှင့်အတူနေကာမျက်မှန်
Wood Case ပါ ၀ င်သည့်အနီရောင် ၀ ါးလိပ်ရောင်ကာရံကာနေကာမျက်မှန်၊
Black Wood နှင့် Metal နေကာမျက်မှန်များ၊ G15 Polarized မှန်ဘီလူးများဖြင့် ၀ ါးအမှုန်များ
Zebrawood အပြည့်အဝ Polarized နေကာမျက်မှန်
Bamboo Case နှင့်အတူလက်ကိုင်သစ်သားသစ်သားကလပ်စတိုင်နေကာမျက်မှန်များ၊
ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Midnight အနက်ရောင်ဝါးကလပ်နေကာမျက်မှန်
ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Polarized အရည်ရွှမ်းအသီး Muti- ရောင်စုံဝါးနေကာမျက်မှန်
Sunset Polarized Sunglasses၊ ၀ ါးအကာနှင့်အတူ Black Bamboo
ချယ်ရီ Wood နှင့် Acetate Polarized နေကာမျက်မှန်
ဟာဗာနာရှိ Jase New York Royce နေကာမျက်မှန်
ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Cherry Wood နှင့် Acetate Polarized နေကာမျက်မှန်
စကိတ်ဘုတ်အလွှာစုံကလပ်နေကာမျက်မှန်၊ အနက်ရောင် Polarized မှန်ဘီလူး
စကိတ်ဘုတ်အလွှာ - ကလပ်နေကာမျက်မှန်၊ ကာလာနှင့်အတူ Polarized မှန်ဘီလူး
Full Frame Black Bamboo နှင့် Case နှင့်အတူ Polarized Sunset Mirror Lenses
Wood Case နှင့်အတူ Polarized ကျောက်ရောင်စုံ Frame, ဝါးနေကာမျက်မှန်
အပြာရောင် Polarized မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ Zebrawood နေကာမျက်မှန်
အနီရောင်အစင်းနှစ်ခုအကွာအဝေး Tone နေကာမျက်မှန်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $48.00 $ -48.00 သိမ်းပါ
အိုကေဒါငါတို့ထွင်းထုသူဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်မရှိခဲ့ဘူး။ ဤနေကာမျက်မှန်၏အတွင်းပိုင်းလက်မောင်းတွင် Polarized ဟုစာလုံးပေါင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားသည်သင်၏အမြတ်ဖြစ်သည်။ ဤနေကာမျက်မှန်သည်အမှားကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အမှတ်အသားပြုထားပြီးအရိပ်ကောင်းသည့်အရိပ်နှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။
အင်္ဂလန် Metal Trim နေကာမျက်မှန်နှင့်ပရီမီယံချယ်ရီသစ်သားမျက်နှာပြင်အပြည့်။ Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat3Lenses, Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့ Microfiber သန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုး, အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်နှင့်အခမဲ့သင်္ဘော!
အရွယ်အစား: Frame အကျယ်: ၅.၇ လက်မ - Frame Height: ၁.၉ လက်မ - ဘုရားကျောင်းအလျား - ၅.၉ လက်မ။
ဝင်ရိုးစွန်းမှန်ဘီလူး: polarized မှန်ဘီလူးတောက်ပဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ဘီလူးများသည်အထူးအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ပင် ၁၀၀% UVA နှင့် UVB ကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ polarized နေကာမျက်မှန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုကယ်တင်နိုင်သည်!
လက်လုပ် Engleberts နေကာမျက်မှန်တစ်ခုစီတိုင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်သစ်သားနှင့်လက်မှုပညာဖြင့်ထုထည်ထားသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သစ်သားအစေ့များကွဲပြားမှုကြောင့်မည်သူမျှအတိအကျမတူနိုင်ပါ။ သင်ဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲ။
ကာကွယ်ထားသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၄၀၀: Engleberts နေကာမျက်မှန်များတွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ထားသောမှန်ဘီလူး ၄၀၀ ရှိသည်။ UV 400 အကာအကွယ်ပေးထားသည့်နေကာမျက်မှန်များသည်နာနိုမီတာ ၄၀၀ ကဲ့သို့သေးငယ်သောရောင်ခြည်များကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၉၉ မှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောနေရောင်ခြည်အန္တရာယ်ရှိသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုမျက်လုံးမှကင်းဝေးစေပြီး၎င်းသည်မျက်လုံးကာကွယ်ရေးအတွက်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။
၉ လွှာ Layer Cat9မျက်ကပ်မှန် Cat3Lenses သည်သင်ဝတ်ဆင်။ ဆက်လက်မောင်းနှင်နိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောမှန်ဘီလူးများဖြစ်သည်။
စတိုင်: Engleberts Wooden နေကာမျက်မှန်သည်လူတိုင်းအပေါ်တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးကောင်းမွန်သောဂန္ထဝင်စပျစ်သီးပြွတ်ပုံစံရှိသည်။ သို့သော်သင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သင်ချီးမွမ်းရယူရန်သွားနေပါသည်!
ပေါ့ပါး: သင်၏ Engleberts ပရီမီယံသစ်သားနေကာမျက်မှန်များသည်ပလပ်စတစ်ထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
Eco-Friendly: ပလပ်စတစ်နေကာမျက်မှန်ကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်အစိမ်းရောင်ကိုသုံးပါ။ Engleberts ပရီမီယံနေကာမျက်မှန်များသည်ရေရှည်တည်တံ့သည်။ ၀ ါးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောအပင်များဖြစ်သည်။ အချို့သောအမျိုးအစားများသည် ၂၄ နာရီအတွင်း ၃ ပေအထိကြီးထွားနှုန်းကိုဖော်ပြသည်။ ၀ ါးသည်ဓာတ်မြေသြဇာမလိုဘဲ၎င်းင်း၏အမြစ်များမှကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သစ်လွင်လာခြင်းကြောင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်မလိုအပ်ပါ။
value ကို: Engleberts အတွဲနှစ်တွဲစီသည်အခမဲ့ပျော့ပျောင်းသောမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တစ်လုံး၊ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအထည်နှင့်နေကာမျက်မှန်ကြိုးများပါရှိသည်။
ကောင်းသောအမှုများ မင်းရဲ့ Engleberts Sunglasses ကိုချီးမွမ်းခံရလိမ့်မယ်။ စန်း! ပြည့်စုံသောနေ့၏ကောင်းသောလုပ်ရပ်။
စိတ်ချရသော 100% အာမခံချက် - - ကျွန်ုပ်တို့သည်နေကာမျက်မှန်ထုတ်ကုန်များကိုယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။ သင်၏ဥစ္စာကိုသင်မကြိုက်လျှင်ပြန်အမ်းငွေအတွက်ပြန်ပေးပါ။
နေကာမျက်မှန်သည်နေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အင်္ဂလန် အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကိုမူရင်း၊ ထူးခြားသော၊ rad၊ ထင်ရှားကျော်ကြားစေရန်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
At အင်္ဂလန် အခြားသူများထက်ကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်ထဲသို့အနည်းငယ်ပိုထည့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်အားလုံးကို polarized ဖြစ်စေပြီး UV 400 ကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှန်များကိုသဘာဝသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Eco-friendly၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ Spring Spring ပတ္တာများ၊ Cat3မှန်ဘီလူးများကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ဟာထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပြီးနေကာမျက်မှန်တစ်စုံကိုရရှိမှာပါ။
သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူရန်အတွက်အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တစ်လုံး၊ အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအထည်နှင့်သင်အားဖြည့်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်၊ နေကာမျက်မှန်ကြိုးများဖြင့်ငွေဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ကအခမဲ့ Polarization စမ်းသပ်မှုကဒ်ကိုတောင်ထည့်လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ရပြီဆိုတာမင်းသိတယ်။ ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုစီတွင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အပိုပစ္စည်းအားလုံးသည်။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $87.98 $ -87.98 သိမ်းပါ
Engleberts 100% Real Sandalwood နေကာမျက်မှန်၊ Ice Blue Polarized မှန်ဘီလူး၊ လက်မှုပညာ၊ UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat3မှန်ဘီလူး၊ Artisan Engraved, Eco-Friendly ။
အတိအကျ Zero People သည်ဤ Sandalwood နေကာမျက်မှန်ဖြင့်သင့်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်စေလိမ့်မည်!
ပါဝင်သည်: Sandalwood နေကာမျက်မှန်, အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်, အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့်အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်!
အင်္ဂါရပ်များ: ဝင်ရိုးစွန်းမှန်ဘီလူး: polarized မှန်ဘီလူးတောက်ပဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ဘီလူးများသည်အထူးအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ပင် ၁၀၀% UVA နှင့် UVB ကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ polarized နေကာမျက်မှန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုကယ်တင်နိုင်သည်!
At အင်္ဂလန် အခြားသူများထက်ကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်ထဲသို့အနည်းငယ်ပိုထည့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်အားလုံးကို polarized ဖြစ်စေပြီး UV 400 ကာကွယ်ထားသည်။ anti-reflective lens နှင့်ပေါ့ပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှန်များကိုသဘာဝသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Eco-friendly၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ Spring Spring ပတ္တာများ၊ Cat3မှန်ဘီလူးများကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ဟာထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပြီးနေကာမျက်မှန်တစ်စုံကိုရရှိမှာပါ။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $47.85 $ -47.85 သိမ်းပါ
ခေတ်သစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ဂန္ထဝင်ခရီးသွားသောပုံစံသည် Mad Man Wood Wayfarers ကိုယောက်ျားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေကာမျက်မှန်များဖြစ်စေသည်။ ဒီစတိုင်တိုင်းမျက်နှာပုံသဏ္onာန်အပေါ်ကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ ရာသီမရွေးအမျိုးသားအသုံးအဆောင်ရှိရမည်။ နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်အပူဆုံးစတိုင်။ ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုများအတွက်အသုံးပြုသောသစ်သားနေကာမျက်မှန်သည်။ တာရှည်ခံဝါးနေကာမျက်မှန်ပါ ၀ င်သည်။ အရူး, ယောက်ျား၏လက်ဆောင်များသခင်။ ပစ္စည်း: သစ်သား။ တစ်ခုကအရွယ်အစားအများဆုံးကိုက်ညီ။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $70.38 $ -70.38 သိမ်းပါ
ပိုလန်၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ UV 400 ကာကွယ်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိသည့် Cat3မျက်ကပ်မှန်များ၊ လက်မှုပညာအက္ခရာတင်ခြင်း၊ Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, ဝါးအိတ်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, Microfiber သန့်ရှင်းရေးအဝတ်, နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့် Polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်!
သဘောကွဲလွဲ: polarized မှန်ဘီလူးတောက်ပဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ဘီလူးများသည်အထူးအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ပင် ၁၀၀% UVA နှင့် UVB ကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဝင်ရိုးစွန်းအကာအကွယ်မရှိဘဲနက်ရှိုင်းသောအမြင်ကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်၊ ပုံပျက်နေသောအမြင်နှင့်အရောင်အမြင်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင်သည်ခေတ္တမျက်စိကွယ်သွားနိုင်သည်။ Polarization သည်ကားမောင်းခြင်း၊ အားကစား၊ ရေအားကစားနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးဝင်သည်။ polarized နေကာမျက်မှန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုကယ်တင်နိုင်သည်!
စတိုင်: လူတိုင်းအပေါ်ကောင်းမွန်သောဂန္တ ၀ င်စတိုင်ကျလှပသောစတိုင်လ်ဖြစ်သော်လည်းသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သင်ချီးမွမ်းရယူရန်သွားနေပါသည်။
Eco-Friendly: ပလပ်စတစ်နေကာမျက်မှန်ကိုရှောင်ခြင်းအားဖြင့်အစိမ်းရောင်ကိုသွားပါ။ Engleberts ပရီမီယံနေကာမျက်မှန်များသည်ရေရှည်တည်တံ့သည်။ ၀ ါးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောအပင်အချို့ဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ၃ ပေအထိကြီးထွားနှုန်းကိုအချို့သောအမျိုးအစားများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ၀ ါးသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသောမြက်ဖြစ်ပြီးဓာတ်မြေသြဇာမလိုဘဲ၎င်းင်း၏အမြစ်များမှကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သစ်လွင်လာခြင်းကြောင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူရန်အတွက်အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တစ်လုံး၊ အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအထည်နှင့်သင်အားဖြည့်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်၊ နေကာမျက်မှန်ကြိုးများဖြင့်ငွေဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ကအခမဲ့ Polarization စမ်းသပ်မှုကဒ်ကိုတောင်ထည့်လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ရပြီဆိုတာမင်းသိတယ်။ ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုစီတွင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အပိုပစ္စည်းအားလုံးသည်
ငါတို့မပြီးသေးဘူး၊ မင်းရဲ့စုံတွဲမှာ Protective Bamboo Case လည်းပါဝင်တယ်။ ဤလှပသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါးအမှုန်များထက်သင်၏အကောင်းဆုံးနေကာမျက်မှန်ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အတွင်းရှိကမ္ဘာမြေ၏ရနံ့ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏အနံ့ကိုသင်နှစ်သက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်ကောင်းသောကံသယ်ဆောင်လာခြင်း။ (သတိပေးချက် - သင်၏ ၀ ါးအိတ်အတွင်း၌အနံ့ခံခြင်းသည်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်) ။
Zebrawood အပြာရောင် Polarized မှန်ဘီလူးများနှင့်သစ်သားအဖုံးများပါ ၀ င်သည့်နေကာမျက်မှန်များ၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော UV 400 ကာကွယ်မှု၊ Anti-Reflective Cat3Lenses နှင့် Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, သစ်သားအိတ်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့်အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်။
Sizing Frame Width: ၅.၉ လက်မ - Frame Height: ၁.၉ လက်မ - ဘုရားကျောင်းအလျား - ၅.၉ လက်မ။
At အင်္ဂလန် အခြားသူတွေထက်ငါတို့နေကာမျက်မှန်ထဲသို့အနည်းငယ်ပိုထည့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်အားလုံး polarized ဖြစ်အောင်၊ UV 400 ကာကွယ်ထားသည်၊ anti-reflective မှန်ဘီလူးများရှိပြီးပေါ့ပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှန်များကိုသဘာဝသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Eco-friendly၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ Spring Spring ပတ္တာများ၊ Cat3မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ဟာထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပြီးနေကာမျက်မှန်တစ်စုံကိုရရှိမှာပါ။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $65.98 $ -65.98 သိမ်းပါ
အနီရောင်ဝါးလိပ်ရောင်ကာရံထားသည့်နေကာမျက်မှန်များ၊ ပိုလီယိုများ၊ လက်မှုပညာ၊ UV 400 ကာကွယ်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိသော Cat3မျက်ကပ်မှန်များ၊ လက်မှုပညာအက္ခရာတင်ခြင်း၊ Artisan ထွင်း
ပါဝင်သည်။ နေကာမျက်မှန်များ၊ ၀ ါးအိတ်များ၊ Microfiber အိတ်၊ Microfiber သန့်ရှင်းရေးအထည်၊ နေကာမျက်မှန်ကြိုးများနှင့် Polarization Test Card ။
အင်္ဂါရပ်များ: သဘောကွဲလွဲ: polarized မှန်ဘီလူးတောက်ပဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ဘီလူးများသည်အထူးအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ပင် ၁၀၀% UVA နှင့် UVB ကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဝင်ရိုးစွန်းအကာအကွယ်မရှိဘဲနက်ရှိုင်းသောအမြင်ကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်၊ ပုံပျက်နေသောအမြင်နှင့်အရောင်အမြင်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင်သည်ခေတ္တမျက်စိကွယ်သွားနိုင်သည်။ Polarization သည်ကားမောင်းခြင်း၊ အားကစား၊ ရေအားကစားနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးဝင်သည်။ polarized နေကာမျက်မှန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုကယ်တင်နိုင်သည်!
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $54.00 $ -54.00 သိမ်းပါ
အင်္ဂလန် Bamboo Case နှင့်အတူပရီမီယံအနက်ရောင်သစ်သားနှင့်သတ္တုနေကာမျက်မှန်များ။ G15 polarized မှန်ဘီလူးများ၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော UV 400 ကာကွယ်မှု၊ Anti-Reflective Cat3Lenses၊ Eco-Friendly ။
ငါတို့မပြီးသေးဘူး၊ မင်းရဲ့စုံတွဲမှာ Protective Bamboo Case လည်းပါဝင်တယ်။ ဤလှပသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါးအမှုန်များထက်သင်၏အကောင်းဆုံးနေကာမျက်မှန်ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အတွင်းရှိကမ္ဘာမြေ၏ရနံ့ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏အနံ့ကိုသင်နှစ်သက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်ကောင်းသောကံသယ်ဆောင်ခြင်း။ (သတိပေးချက် - သင်၏ ၀ ါးအိတ်အတွင်း၌အနံ့ခံခြင်းသည်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်) ။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $79.18 $ -79.18 သိမ်းပါ
Engleberts 100% Zebrawood Full Frame Sunglasses, Polarized Lenses၊ လက်မှုပညာ၊ UV 400 ကာကွယ်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိ၊ CAT3မျက်ကပ်မှန်များနှင့် Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့ Microfiber သန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့်အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်။
Engleberts ပရီမီယံ walnut သစ်သားကလပ်စတိုင်နေကာမျက်မှန်, Polarized, လက်, UV 400 ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Anti-Reflective Cat3မှန်ဘီလူး, လက်မှုပညာထွင်း, Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်။ နေကာမျက်မှန်များ၊ ၀ ါးအိတ်များ၊ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်၊ ထူသောမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်အထည်၊ နေကာမျက်မှန်နှင့် Polarization Test Card ။
NASA, TESLA, MIT နှင့် BMW တို့၏နေကာမျက်မှန်များ၌သာအသုံးပြုခြင်း၏စွမ်းရည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ပြီးနောက် ၅ ဆတိုး။ Engleberts Premium Sunglasses ကိုမြှောက်ပါ။
Midnight Black Bamboo Club နေကာမျက်မှန်၊ Polarized, HandCrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective, Cat3Lenses, Artisan Engraved, Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, ဝါးအိတ်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့်အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်!
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $68.18 $ -68.18 သိမ်းပါ
အရည်ရွှမ်းသောသစ်သီးများအရောင်စုံသည့် ၀ ါးနေကာမျက်မှန်၊ Polarized၊ Handcrafted, UV 400 Protection, Anti-Reflective Cat3မှန်ဘီလူး၊ Artisan Engraved, Eco-Friendly ။
သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူရန်အတွက်အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တစ်လုံး၊ အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအထည်နှင့်သင်အားဖြည့်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်၊ နေကာမျက်မှန်ကြိုးများဖြင့်ငွေဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ကအခမဲ့ Polarization စမ်းသပ်မှုကဒ်ကိုတောင်ထည့်လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ရပြီဆိုတာမင်းသိတယ်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားထားသည့် ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုစီတွင်ထည့်သွင်းထားသောအပိုပစ္စည်းများအားလုံး၊
ငါတို့မပြီးသေးဘူး၊ မင်းရဲ့စုံတွဲမှာ Protective Bamboo Case လည်းပါဝင်တယ်။ ဤလှပသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါးအမှုန်များထက်သင်၏အကောင်းဆုံးနေကာမျက်မှန်ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အတွင်းရှိကမ္ဘာမြေ၏ရနံ့ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏အနံ့ကိုသင်နှစ်သက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်ကောင်းသောကံသယ်ဆောင်လာခြင်း။
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $72.58 $ -72.58 သိမ်းပါ
Midnight Black Bamboo Club နေကာမျက်မှန်၊ Polarized Sunset မှန်ဘီလူး၊ လက်မှုပညာ၊ UV 400 ကာကွယ်ခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိခြင်း၊ Cat3မှန်ဘီလူး၊ Artisan Engraved, Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, ဝါးအိတ်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုး, အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်!
ပုံမှန်စျေးနှုန်း $61.58 $ -61.58 သိမ်းပါ
Cherry Wood နှင့် Acetate Polarized နေကာမျက်မှန်များ၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော UV 400 ကာကွယ်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိသော Cat3မျက်ကပ်မှန်များ၊ Eco-Friendly ။
ပါဝင်သည်: နေကာမျက်မှန်, အခမဲ့ Microfiber အိတ်, အခမဲ့ Microfiber သန့်ရှင်းရေးအဝတ်, အခမဲ့နေကာမျက်မှန်ကြိုးနှင့်အခမဲ့ polarization ကိုစမ်းသပ်ကဒ်!
Acetate သည်ဓာတ်မတည့်သည့်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးအပင်များမှပြုလုပ်သည်။ ရေနံအခြေခံပလတ်စတစ်များနှင့်မတူဘဲအက်တတိတ်ပလတ်စတစ်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်၊
လက်လုပ် Engleberts နေကာမျက်မှန်တစ်စုံစီသည်ပရီမီယံသစ်သားနှင့်လက်မှုပညာဖြင့်ထုထည်ထားသောတစ် ဦး ချင်းစီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သစ်သားအစေ့များကွဲပြားမှုကြောင့်မည်သူမျှအတိအကျမတူနိုင်ပါ။ ခင်ဗျားဘယ်လောက်ထူးခြားလဲ
Jase New York Royce နေကာမျက်မှန်တွင်သတ္တုပါသော cross-hatch ဘုရားကျောင်းများနှင့်အလင်းရောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောစတုဂံပုံဘောင်ပါရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအနီးကပ်ပတ် ၀ န်းကျင်အပြိုင်မျဉ်းကြောင်းများကိုရေးခြစ်ခြင်းဖြင့် tonal သက်ရောက်မှုများကိုဖန်တီးသည့်အနုပညာနည်းစနစ်ကိုတုပရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအရာများကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်တင်ပါ။
(မှန်ဘီလူး) / (တံတား) / (နမူနာ)